आय–आर्जनको राम्रो स्रोत केरा खेती | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / आय–आर्जनको राम्रो स्रोत केरा खेती
आय–आर्जनको राम्रो स्रोत केरा खेती
Posted by: युगबोध in विचार July 10, 2018	0 65 Views
ने पालका तराई तथा भित्री मधे शहरुमा सफलतापूर्वक खे ती गर्न सकिने उच्च मूल्यका बालीहरुमध्ये के रा खे ती पनि एउटा गतिलो आयमूलक बाली हो  । यसबाट कम लागत तथा छो टो समयमा नै सन्तो षजनकरुपमा उत्पाद लिन सकिन्छ । यिनै कारणले नै हो ला आजभो लि यसको खे ती दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । स् वास् थ्यको दृष्टिको णले हे र्दा पनि के रा अन्य फलफूलभन्दा अगाडि र शक्ति प्रदान गनेर् मा उत्कृष्ट मानिन्छ । के रामा भिटामिन ए, वी र सी सन्तो षजनकरुपमा प्राप्त हुन्छ । के रालाई सामान्य तथा पाके पछि मात्रै खाने गरिए पनि अन्य तरीकाहरु अपनाएर पनि खान सकिन्छ । जस् तै अचार बनाई खाने , पाके को के रालाई चाना काटी सुकाई त्यसलाई कुटे र, पिसे र पीठो निकाली हलुवा बनाएर पनि खान सकिन्छ ।
के रा खे ती सञ्चालन गर्दा सर्वप्रथम तापक्रममा बढी ध्यान पु¥याउनुपनेर् हुन्छ । राम्रो खे ती सञ्चालन गर्नको लागि सामान्यतया २० दे खि ३० डिग्री से ल्सियस तापक्रम हुनुपर्दछ । यदि तापक्रम १५ डि.से . भन्दा कम र ३९ डि.से . भन्दा बढी हुन गएमा के राको बृद्धि विकासको साथै फूल फुल्ने कार्य रो किने हुन्छ । तसर्थ तापक्रमको बढी नै ख्याल गरी खे ती सञ्चालन गर्नुपनेर् हुन्छ । यसको खे ती सबै खाले माटो मा गर्न सकिन्छ । तर पानी नजम्ने चिस् यान भइरहने बलौ टे दो मट माटो धे रै उत्तम मानिन्छ ।
के रा लगाउनुपूर्व जमिनलाई राम्रो स“ग खनजो त गरी तयार पानेर् र दुईदे खि तीन मिटरको फरकमा आधा मिटर लम्बाइ, चौ डाइ र गहिराइको खाडल खनी, त्यस खाडलमा पाके को गो बर मल या कम्पो ष्टमल माटो मा मिलाई त्यस खाडलमा राख्ने र त्यसपछि मात्र उक्त खाडलमा के राको सकर (बे र्ना) रो प्नुपर्दछ । बे र्ना रो प्दा के राको गानो लाई आधा खाडल तल राखी माटो ले पुरे र चारै तर्फबाट दाबी दिने गर्नुपर्दछ । के रालाई मल धे रै नै आवश्यक पनेर् हुदा बे र्ना रो पे पछि हरे क छ÷छ हप्तामा प्रति बो ट ५०÷५० ग्रामका दरले नाइट्रो जन, फस् फो रस र पो टास बो टको वरिपरिबाट राखी माटो ले पुरी हल्का सिंचाई दिनुपनेर् हुन्छ । तब मात्र बो टको राम्रो विकास हुन्छ ।
के राका जातहरुः के राका धे रै प्रकारका जातहरु भए पनि हाल प्रचलनमा आएका राम्रो उत्पादन दिने के ही जातहरुको मात्र जानकारी गराइएको छ । यीमध्ये कुनै पनि लगाउ“दा राम्रो फाइदा लिन सकिन्छ ।
१. बसराई ड्वार्फः यो जातको बो ट हो चो हुनुका साथै यसको उचाइ के वल दुई मिटर मात्रै हुन्छ । यसको को सा २५ से .मी. लामो हल्का बा¨ो दे खिने पाके पछि पनि हरियो हुने पहे ंलो धे रै नहुने खानमा मिठो एकघरीमा लगभग एक सय ३० वटा को सा फल्छ ।
२. रो बस् टाः यो जात पनि हो चो नै हुन्छ तर बसराई भन्दा के ही अग्लो दे खिन्छ । यसको उचाइ २.३ मिटरसम्म हुन्छ । फल बसराईको जस् तै हो  । तर यसको घरी ठूलो हुनुको साथै को सा संख्या चार सयदे खि चार सय ५० सम्म हुन्छ ।
३. हरिछालः यो जात बसराई रो वस् टा भन्दा अग्लो हुन्छ । यसको उचाइ तीन मिटरसम्म र फल बसराईको जस् तै हुन्छ तर को सा पाके पछि पनि हरियो नै हुन्छ पहे ंलो हु“दै न । यसको को सा संख्या एक सय ६० वटासम्म भएको पाइएको छ ।
४. मालभो गः यो जात ने पालको लो कप्रिय स् थानीय जात हो  । यसको बो ट चार/पाच मिटरसम्म अग्लो हुने र एउटा घरीमा एक सय २० वटासम्म को सा लाग्ने खानमा अति नै मिठो र धे रै दिनसम्म रहन सक्ने नसड्ने र सुख्खा ठाउ“मा पनि लगाउन सकिने जात हो  ।
यी जातहरुको बे र्ना (सकर) लगाउ“दा ठूला बो ट नलगाई स–साना (६०/७० से .मी.को ) गानाहरु जसमा दुई÷तीन वटासम्म आ“खा हो स त्यस् ता बिरुवा छनो ट गरी बे र्ना रो प्नु राम्रो हुन्छ । ठूला बो ट रो प्नु उपयुक्त हुदै न ।
रो प्ने समयः सामान्यतया के रालाई वर्षमा तीन सिजनमा रो प्ने गरिन्छ । पहिलो पुसदे खि फागुनसम्म, दो स्रो वै शाख–जे ठ र ते स्रो साउन–भदौ हुन् । यी सिजनमध्ये कुनै मा बे र्ना रो प्न सकिन्छ ।
सिंचाईः के रालाई वर्षाको समयमा बाहे क अन्य समयमा सिंचाईको आवश्यकता पर्दछ । के रामा चिस् यानको कमी हुन गयो भने के राको उत्पादन नराम्रो स“ग घट्ने हुन्छ । तसर्थ हो चा जातका के राहरुलाई के रा नपाक्दासम्म सिंचाईको आवश्यकता पर्दछ । तसर्थ चिसो हे री सिचाई दिई नै रहनुपर्दछ ।
गो डमे लः के राको बारीलाई सधै सफा सुग्घर बनाई राख्नुपर्दछ । बो टको वरिपरि झारपात गो डमे ल गनेर् र के राका सकरहरु बढी निस् के मा माउ बो ट सग दुईवटा मात्र रहन दिई अरु बो ट काटिदिनुपर्दछ । जब माउ बो टले घरी निकाल्छ तब मात्र अकोर् एक बो ट बढ्न दिनु राम्रो हुन्छ । यो प्रविधि अपनाइएन भने के राको राम्रो उत्पादन लिनै सकिदै न ।
बुगो काट्ने ः के राको घरी बनिसके पछि (को सा राम्रो स“ग लागिसके पछि) के राको घरीको तलको बु“गो काटिदिनुपर्दछ । यसो गर्दा को साहरु सबै एकै नासको हुनुका साथै तौ लमा पनि बढी हुने गरे को पाइएको छ ।
के रा काट्ने ः सामान्यतया के रा नौ दे खि १२ महिनासम्ममा फल लाग्ने गर्दछ । यस अवधिभर सिंचाई, गो डमे ल र कीरा नियन्त्रण आदिमा ध्यान दिइरहनुपर्दछ । के रा काट्ने बे लामा के रा पुरै छिप्पिएको छ छै न भनी जान्नको लागि को साको टुप्पो मा काला–काला फूलहरु सुके को दे खिने गर्दछन्, तिनीहरुलाई हातले छु“दा झनेर् गरे मा के रा छिप्पिएको छ भनी जान्नुपर्दछ । के राको बो ट
काट्दा एक मिटर जमिन माथि बाटै काट्नुपनेर् हुन्छ । किनभने त्यसमा रहे को पो षकतत्व बा“कीरहे मा अरु बो टहरुलाई काम लाग्ने हुन्छ । त्यसै ले माथिबाट काट्नु राम्रो हुन्छ । तसर्थ यी सम्पूर्ण कुराहरुलाई ध्यान दिई के रा खे ती गनेर् हो भने अवश्य पनि राम्रो आम्दानी लिन सक्नुहुने छ । आशा छ यो प्रविधिले के रा खे ती शुरु गनेर् वा खे ती गरिसक्नुभएका व्यक्तिहरुलाई खे ती सञ्चालन गर्न के ही सहयो ग पुग्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
Previous: भन्सारमा नाम एक सामान अनेक
Next: दाङमा वैकल्पिक विमानस्थल बनाउने सरकारी योजना–२